Pakistan: Heverinao ve ny fangirifirian’ireo tra-boina tamin’ny tondra-drano? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2010 19:23 GMT
Andramo ity ao amin'ny Google ity: tadiavo ‘Tondra-drano any Pakistan amin'ny teny anglisy dia ho hitanao fa hahita valiny hatramin'ny 21 400 000 ianao. Kanefa valiny 1 760 000 no ho hitanao raha mijery io teny fototra io amin'ny teny Sinoa ianao. Misy fiantraikany izany tsy fitoviana izany.
Angamba mety ho marina fa ny olona miteny anglisy dia manana fo antra manoloana ny firenena mahantra. Ohatra fotsiny ny praiminisitra britanika Nick Clegg izay nanambara tamin'ny 17 aogositra 2010 fa i Grande Bretagne dia nandray andraikitra lehibe teo amin'ny ezaka fanampiana ary ny valin-kafatra nomen'ny firaisam-be iraisam-pirenena dia “mahonena tanteraka”.
The Sound of Hope (Feon'ny Fanantenana), fampielezam-peo iraisam-pirenena mpamokatra vaovao mahakasika an'i Azia, koa dia manaiky fa i Grande Bretagne amin'ny maha firenena azy dia nanentana ny firenena hafa hanome fanampiana ho an'ny tra-boinan'ny tondra-drano any Pakistan.
Endrika hatreny an'habakabaka ny tondra-drano ao Pakistan. Saripika mpikirakira Flickr DFID – UK Department for International Development. CC BY-NC-ND
Kanefa tsy nampoizina, tamin'ny 19 aogositra, mpitoraka bilaogy antsoina hoe K^se nanambara tao amin'ny Pakistan Defense Forum (Seraseran'ny Fiarovana any Pakistan) fa miaraka amin'ny 105 tapitrisa dôlara (67 tapitrisa livres) ho fanampiana an'i Pakistan dia i “Arabia Saodita no nihoatra an'i Etazonia ary izy no nanolotra fanampiana be indrindra ho an'ny fanarenana an'i Pakistan tondraky ny rano. Ny Britanika nanome 31 tapitrisa livres, ny Amerikana nanolotra lelavola 76 tapitrisa dôlara.”
Efa ao amin'ny aterineto sahady ny fomba fijery izay mandresy lahatra fa ireo izay “tokony” hanampy dia tsy ampy ny nomeny. Raha raisina ny voalaza tao amin'ny vaovaon'ny BBC hoe “Iza no hiraharaha an'i Pakistan”, izay mametraka fa ny firenena Silamo dia tokony hanome bebe kokoa hanampiana an'i Pakistan.
Raha mihantsy ireo firenena rehetra amin'io resaka io ny fampahalalam-baovao, dia mpitoraka bilaogy Sinoa iray miaro ny fireneny ao amin'ny bilaoginy:
“Ohatry ny hoe tsy misy dikany ny 60 tapitrisa RMB (1 tapitrisa dôlara) nomen'ny fanjakana sinoa raha ampitahaina amin'ny an'ny hafa raha matotra ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Pakistan. Angamba mahafantatra i Beijing joe tahaka ny ahoana ny olana ao amin'ny fireneny na angamba koa hoe fantany fa sakafo no ilain'i Pakistan noho ny lelavola”.
Raha misy fifaninana mikasika ny “firenena tsara fanahy indrindra”, dia angamba azontsika hatao ny mitonona mpandresy anankiray avy amin'ny habetsahan'ny fanampiana natolony hamonjena tra-boina. Avy amin'ny fanisana Wikipedia, raha raisintsika ny raikipohy ny amin'ny firenena tsara fanahy = fanampiana azo tamin'ny tondra-drano/fitambaran'ny GDP2009, dia mahazo valiny tahaka izao isika: Arabia Saodita (0.0255) > Grande Bretagne (0.00458) > Inde (0.002) > Bangladesh (0.0019) > Etazonia (0.0011) > Chine (0.0008). Na dia natao handaniana andro fotsiny aza iny ohatra iny dia milaza amintsika fa:
Mazana dia mifantoka bebe kokoa amin'ny dikan'ny fampitahana isika raha tokony hieritreritra ny zavatra tsara tokony hatao.
Matetika dia mieritreritra isika fa efa nanao be ny firenentsika ka tokony “hampirisihana koa ny hafa hanome”, kanefa ampitaintsika amin'ny maha olon-tsotra antsika izany.
Tsy afaka manova anao ho olona tsaratsara kokoa ny firenenao na ny fivavahano, ary na dia manana olana aza ny firenena sasany tahaka ny hoe kolikoly sy asa fampihorohoroana, tsy afaka manova ny olona ao mainy hanjary tsy ho olona izy.
Tamin'ny 18 septambra dia nanao antso indray ny Firenena Mikambana hitadiavana 2 lavitrisa dôlara hanampiana an'i Pakistan, raha mbola vao ny 80% ny tokony ho nomena tamin'ny voalohany (460 tapitrisa) dôlara no tafavoaka hatreto. Tsy mahazatra ny fihisaran'ny olona mamaly antso tahaka izao. Angamba vokatry ny zavatra notenenin'i Dokotera Elizabeth Ferris izay nilaza tao amin'ny vaovaon'ny BBC fa “malaina manome ny olona ho an'ny firenena lazaina fa fialofan'ny mpampihorohoro”
Ireto olona miantsoantso vonjeo ireto dia azo antoka fa tsy mpampihorohoro. Sa tsy izany? Oxfam Hong Kong nandefa fitehirizana sary nahitana sary 42 ao amin'ny Flickr, ny sary tsirairay jerena manatrika, ary ny tantarany ao ambadika.
Tsy maintsy mijoro amin'ny maha olona antsika isika, araka ny nolazain'i Saif Rana, mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo ao Lahore, Pakistan, ao amin'ny seramailaka nalefa tao amin'ny bilaoginy:
“Lasa fahazarana ny mahita fa ny firenena dia fantatra amin'ny alalan'ny fahaizany mitantara sy ny politika ampiasainy ary ny fanapahan-kevitra raisiny. Raha ny tena marina dia tsy eritreretiny ny momba antsika. Tsy izy ireo mihitsy no taratra eo amin'ny fiaraha-monina”
Nampirisahany koa ny fijerena ny maha olona:
“Kilasian'ny olona ho firenena ny hoe Pakistaney, Karana, Taiwaney, Sinoa, Rosiana… Hadinontsika fa mialoha ny rehetra dia olombelona isika!!! Tonga ny fotoana hisedran'ny natiora antsika ary tsy ny Pakistaney ihany (na maha Pakistanaey) izay very trano, very zanaka sy ny zavatra rehetra nandritra ny tondra-drano namono iny; fa kosa sedra ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izaoamin'ny fomba hamonjeny ny vahoaka Pakistaney”.
Izahay, amin'ny anaran'ny tenanay manokana dia afaka manao zavatra maro, kanefa dingana voalohany dia ny fieritreretana fa ny tsirairay dia tokony hifantoka amin'ny fizarany fanampiana ho an'ny Pakistaney, na hisafidy isika hieritreritra tahaka ity anaty sary mihetsika manaraka ity hoe “Ny fanentanana tsy hanampianana'i Pakistan”:
nalaina ity sary mihetsika ity teo ambany fanaraha-mason'ny Mohammad Rachid Charity Fundation (Fikambanana Mpanao Asa soa an'i Mohammad Rachid), fikambanana mpanao asa soa lehibe indrindra any Proche Orient manana ny foibeny ao Dubai. ny hetsika “Sakafo asa soa ho fanampiana an'i Pakistan” dia nanomboka tamin'n y7 septambra 2010 tao amin'ny Monarch Hotel ao Dubai, ary vola 200 000 dirames (54 451 dôlara) no voaangona ho an'ny tra-boinan'ny tondra-drano tany Pakistan.
Ireo voalaza ao amin'ny sary mihetsika:
“Ny ampahadimin'ny firenena ihany no tondraky ny rano.”
“Iza no hiraharaha an'i Pakistan?”
Fantatrao ny valiny; satria malalaka amin'ny fijerena ny fandehan-javatra sy ny fiheverana olona ianao. Ary koa satria, olombelona malalaka amin'ny fanomezan-tanana ianao.